Maitiro Ekuita Inzwi Kutsvaga PaYouTube? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 576
Iyo yeYouTube chikuva haina kuneta yekuvandudza uye kupa zvinhu zvitsva kune yega yega yevateveri vayo. Ino nguva yakaisa sarudzo ye tsvaga kutsvaga kwezwi nenzira yakapusa uye inokurumidza. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezvenyaya iyi, usatsauka kubva kuchinyorwa chinotevera.
Kutsvaga izwi paYouTube ndeimwe yemabasa achangoburwa iyo YouTube yakabatanidza zvese mune yayo nharembozha application uye mune desktop desktop. Iye zvino kuitisa kutsvaga papuratifomu kuri kukurumidza uye kusununguka. Hauchazofaniri kunyora kuti uwane zvemukati.
Tsvaga mazwi pawebhu yeYouTube
Munguva ichangopfuura, chikuva cheYouTube chakabatanidza mukana wekutsvaga izwi kuburikidza neiyo desktop desktop. Vashandisi vakagamuchira iyi nyowani nyowani zvine mutsindo, uye kupfuura zvese, kushandisa chinhu ichi ndechimwe chezvinhu zvakapusa zvatingaite mukati meiyo peji.
Ita mazwi ekutsvaga paYouTube zvinoita kuti zvinhu zvive nyore paunenge uchiedza kutsvaga chero zvemukati mukati meiyi chikuva. Kana iwe uchityaira uye uchida kutsvaga vhidhiyo, hauchazofaniri kunyora, ikozvino nekungotaura chete unogona kuwana vhidhiyo iwe yauri kutsvaga.
Varipano mamwe ematanho ekutevera Kugadzira kutsvaga kwezwi kubva pa desktop desktop yeYouTube:
Nhanho 1: Tarisa kana iwe uine sarudzo inogoneswa
Chinhu chekutanga iwe unofanirwa kuita tarisa kana iyi sarudzo yatove yakavhurwa mukati meakaundi yako. Kuti uite kudaro, iwe unofanirwa kungopinda ne email yako uye password.
Paunenge uchinge uri mukati mepuratifomu uchafanirwa kugadzirisa kutarisa kwako pabhawa rekutsvaga riri kumusoro kwechiso. Kana iwe ukatarisa iyo maikorofoni icon Zvinoreva kuti iwe une sarudzo inogoneswa uye kuti iwe unogona kutsvaga izwi mukati mepuratifomu.
Nhanho 2: Tsvaga izwi
Mushure mekutarisa kuti chishandiso chakagoneswa muaccount yedu tinokwanisa enderera kutsvagisa izwi muYouTube. Kuzviita zvakapusa uye nekukurumidza.
Isu tine chikwereti chete tinya maikorofoni icon izvo zvinowoneka padyo padyo nebha yekutsvaga. Kana ino inguva yekutanga yauri kushandisa chishandiso ichi, iyo yekare mvumo skrini ichaonekwa. Ikoko iwe unofanirwa kugamuchira mazwi kuitira kuti ufambire mberi.
Iye zvino unogona kutanga shandisa chishandiso chekutsvaga izwi hapana zvinonetsa. Dhinda pamaikorofoni uye ratidza zvaunoda kutsvaga mukati mepuratifomu.
Zvakakosha taura zvinonzwika uye zvakajeka kuitira kuti Youtube ikwanise kutsvagisa zvinobudirira. Unogona kutsvaga chero zvemukati zvaunoda, kunyangwe kunyorera kwako, mavhidhiyo aunofarira kana vhidhiyo yakakosha.
Shandisa chishandiso kubva kuApp
Vashandisi vanogona zvakare ita kutsvaga kwezwi kubva kune nharembozha kubva kuYouTube. Aya ndo maitiro aunogona kuzviita:
Vhura iko kunyorera pane yako nhare
tinya pamusoro pemakrofoni icon (padivi pebhawa rekutsvaga)
Iyo app ari kuteerera, saka chiudze zvaunoda kutsvaga mukati meplatform.
Mhedzisiro yakati wandei ichaonekwa. Sarudza iyo chaiyo sarudzo uye ndizvozvo
1 Tsvaga mazwi pawebhu yeYouTube
2 Matanho ekutevera
2.1 Nhanho 1: Tarisa kana iwe uine sarudzo inogoneswa
2.2 Nhanho 2: Tsvaga izwi
3 Shandisa chishandiso kubva kuApp